Guriga Cabdi Qaybdiid oo la weeraray | Raadgoob
Guriga Cabdi Qaybdiid oo la weeraray
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda weerartay guriga Senetor Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo duhurnimadii Sabtida ciidan hubaysan oo loo malaynayo inay kuwa dawladda yihiin ay xoog ku galeen.
Xilliga weerarku uu dhacay, Mr Qaybdiid waa uu ka maqnaa guriga, mana jiro wax khasaare nafeed ah oo halkaa ka dhashay.
Senetor Cabdi qaybdiid oo goor dambe saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in taliyaha nabadsugidda ee gobolka Banaadir uu ku wargeliyey in guriga ay soo weerareen ‘ciidamo ka amar qaata Iimaaraadka carabta’.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku amray Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo falkii sharci darrada ahaa ee lagu galay hoyga Senator Cabdi Qaybdiid. Cid walba oo ku lug yeelata waxaa lala tiigsan doonaa sharciga.
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @TheVillaSomalia
Barta Twitterka ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa iyadana lagu qoray in madaxweynaha Soomaaliya uu taliyaha milateriga ku amray in baaritaan lagu sameeyo dhacdadaas, ayadoo ‘ciddii ku lug yeelatana sharciga lala tiigsan doono’.
Sawirro laga soo qaaday guriga Sen. Cabdi Qaybdiid ayaa muujinaya burbur loo gaystay agabkii guriga yiillay.
Image caption Cidna waxba kuma noqon weerarka
Image caption Cabdi Qaybdiid wuu maqnaa markii gurigiisa la weeraray
Wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dawladda Soomaaliya ayaa goor dambe shaacisay in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu xabsiga u taxaabay 40 askari oo ciidanka dawladda ka tirsan iyo laba sarkaal oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday guriga Cabdi Qaybdiid.
Dowladda Sacuudiga oo sheegay in gantaal lagu soo weeraray magaalada barakaysan ee Makkah
Madaxwaynaha Maraykanka Trump oo Hanjabaad Culus u Diray Iiraan,xilli ay sii kordhayso xiisadda gobolka
Toos u Daawo xuska munaasabada 18ka May oo Guud ahaan Somaliland laga xusaayo
Madaxwayne farmaajo oo ka hadlay mawqifkiisa arinta doorashada ee muranka badan dhalisay